वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : शाकाहारतिरको यात्रा-१
म हुर्केको परिवार, परिवेश अलिअलि मांसाहारी थियो। जातीय कारणले खसी-बोका मात्रै खान हुने मानिन्थ्यो। कुखुराको अण्डा पनि खान नहुने मानिन्थ्यो, तर केहि ‘आँटिला’हरुले अण्डा र कुखुराकै मासु पनि खान थालीसकेका थिए। ती आँटिलामध्येमा पर्न आफूसंग भने गाँठ र आँट दुबै थिएन:) धेरै खान सक्ने हैसियत थिएन तर मासु एउटा ‘विशेष’ खानेकुरा मानिन्थ्यो र चाडबाड, विशेष गरी दशैं, चैते दशैंमा यो अनिवार्य ठानिन्थ्यो। आक्कलझुक्कल अरु बेलामा पनि यो मुखमा पर्न आईपुग्थ्यो। यसरी हेर्दा मेरो बाल्यकाललाई म ९५ प्रतिशत शाकाहारी र ५ प्रतिशत मांसाहारी मान्न सक्छु :)
शिक्षा र रोजगारीका लागि मान्छेहरु शहर पस्न थालेपछि तिनले खाने मासुको परिमाण पनि बढ्न थाल्यो। अत्यन्त ‘स्वादिष्ट’, ‘सम्मोहनकारी’ र ‘शक्तिशाली’ म:म:लाई चिनेपछि त्यसबाट को बँच्न सकोस्! खसी-बोकामात्रै सिध्याउन पाउने भनेर तोकिएका बाहुनहरुले प्लेटका प्लेट भैंसी पनि सखाप पार्न थाले। तीन वर्षको दौरान गोटा सौ एक प्लेट ‘भैंसी’ मेरा पेटमा पनि पसे हुनन्। तैपनि औसतमा मेरो मांसाहारको परिमाण खासै बढेको मान्न सकिन्न।
अध्ययनका लागि २०४८ मा चीन पुगेपछि भने मासुको परिमाण बेस्सरी बढ्यो। चीनियाँ भोजनमा मासुको अंश ज्यादै धेरै हुन्छ। सागपातपनि थरी-थरिका र धेरै पाईन्थे तर मासु धेरै सस्तो लाग्थ्यो। ‘चिनियाँहरुले उड्नेमा हवाईजहाज र हिँड्नेमा मोटर बाहेक जे पनि खान्छन्!’ भन्ने सुनिन्छ यदाकदा। त्यो साँच्चै हो जस्तो लाग्थ्यो मलाई चिनियाँहरुको खानपीन हेर्दा। अहिलेको चीनमा कस्तो छ त्यति थाहा भएन तर मेरो अनुमानमा त्यहाँ शाकाहारी बढेका छैनन् बरु घटेका होलान्।
चीनमा बस्दा कुखुरा र बुंगुरको मासु सबैभन्दा धेरै खाईयो। मुसलमानका भोजनालयहरुमा खसीको मासु पनि खाईयो र यदाकदा गाईकै मासु पनि खाईयो होला, जोगिन खोज्दा-खोज्दै पनि खानामा गाईको मासु छ भन्ने थाहा नभएर र कहिलेकाहीँ भुँडी भर्ने अरु कुनै उपायनै नदेखेर। नेपालमा छँदा गनेर दुई-तीन पटक भन्दा बढी माछा खाने सौभाग्य मिलेको थिएन होला, चीनमा माछा खान पनि ‘पारंगत’ भईयो:)
नेपाल फर्केपछि पनि कुखुरा र खसीको मासुलाई निरन्तरता दिईयो। भैंसीवाला म:म: भने खान छोडियो।
दोश्रो प्रवासका लागि जापान पुगेपछि फेरि चीनकै जस्तो स्थिति दोहोरियो। त्यहाँ पनि माछा-मासु नखाई टिक्न नसकिने स्थिति छ। सुविधासम्पन्न जीवन जीऊन सक्नेहरुको कुरा बेग्लै तर सामन्यतया शाकाहारी जीवन मांसाहारीभन्दा महंगो लाग्छ जापानमा। ‘शाकाहारी हुँ’ भनेर कसैले भन्दा जापानीहरु छक्क पर्छन् र सोध्छन्; “अण्डा पनि खाँदैनस्?” वा “माछा पनि चल्दैन?”। कतिपय रेष्टुरेण्ट वा भोजहरुमा मासु र आलु मिसाएर पकाएको तरकारीबाट आलुका टुक्राहरुमात्रै छानेर शाकाहारी ब्यक्तिलाई दिईएका कुराहरु पनि धेरै सुनिन्छन्। परम्परागत जापानी खानामा माछा र समुद्री जीवको प्राधान्यता छ तर गत शताब्दीबाट पश्चिमा खानाको प्रभावका कारण जापानमा मासुको खपत पनि धेरै बढी छ।
जापानमा शकाहारी खानाको अस्तित्वनै छैन होला भन्ने लागेको थियो मलाई तर नेपाल फर्कने केहि महिना अघि पुगेको एउटा बौद्ध मन्दिरले भने मेरो त्यो सोचाईलाई गलत साबित गरिदियो।
एकजना शुभचिन्तक जापानी बृद्धाले लिएर गएकी थिईन् हामीलाई त्यो मन्दिरमा। आफूलाई कहाँ लगिँदैछ भन्ने बारेमा त्यति नबुझ्दा-नबुझ्दै पनि हामी उनको पछि लागेका थियौं, एउटा आईतवार बिताउनु थियो जसरी भएपनि:)
जापानी बौद्ध परम्पराका बिभिन्न सम्प्रदायहरुमध्ये कुनै एकद्वारा संचालित त्यो मन्दिर हंसमुख बुद्ध (Laughing Buddha) को रहेछ। प्रवचनकर्ताका अनुसार उनीहरु Laughing Buddha लाई बौद्ध धर्मशास्त्रहरुमा वर्णित गौतम बुद्ध पछिका बुद्ध, मैत्रेय बुद्ध मान्दा रहेछन्। पछि मैले ईण्टरनेटमा पनि खोजेको थिएँ; Laughing Buddha लाई मैत्रेय बुद्ध मान्नेहरु यहाँमात्रै होईन जापानकै अन्य भाग र अरु देशहरुमा पनि धेरै रहेछन्।
मन्दिरसंगै भव्य सुविधापूर्ण प्रार्थना कक्षहरु, ध्यान कक्षहरु पनि थिए। प्रवचनहरुपछि हामीलाई पनि सामूहिक, ब्यक्तिगत प्रार्थनामा सहभागी गराईयो। त्यसपछि भोजनालायतिर लगियो। त्यहाँको भोजनालयमा पूर्ण शाकाहारी भोजन तयार हुँदो रहेछ। हामीकहाँ शाकाहारीहरु गाईभैंसीको दूध भने खान्छन् तर त्यहाँ दूधसंग सम्बन्धित भोजन पनि छँदै थिएनन्। त्यो सम्प्रदायमा दूधलाई पनि मासुजस्तै मानिने रहेछ। खाना अत्यन्त स्वादिष्ट थियो, र उनीहरुले भनेअनुसार त्यो अत्यन्त पौष्टिक पनि हुन्छ रे। जीवनमा पहिलोचोटि मैले पूर्ण शाकाहारी तर माछामासुभन्दा धेरै स्वादिष्ट र पौष्टिक खानाको स्वाद पाएँ।
त्यो ठाऊँमा फेरि पुग्ने मेसो मिलेन तर त्यो घटनाले मांसभोजनलाई निरन्तरता दिन मेरो मनले बनाएको एउटा ‘निहुँ’लाई भने गतिलै धक्का दियो। केहि वर्षयता मासु खानका लागि गरिने पशुपञ्छीको बध, तीनलाई दिईने यातना आदिका प्रति म संवेदनशील हुँदै गईरहेको थिएँ तर मासु छोड्न सकिरहेको थिईँन। मैले खोजेका बिभिन्न बहानाहरुमध्ये ‘माँसाहारजत्तिको पौष्टिक शाकाहार नहुन सक्छ’, अथवा कम्तिमा ‘हामी शाकाहारी खानालाई मिलाएर बनाउन जान्दैनौं”; “जापानमा शाकाहारी हुनु असम्भव छ” आदि प्रमुख थिए। तर उक्त मन्दिरमा पुग्ने संयोगले मलाई मेरो कमजोर ईच्छाशक्तिनै सबैभन्दा प्रमुख कारण हो मैले मासु छोड्न नसक्नुमा भन्ने बोध गराईदियो। त्यसयता मैले माछामासुलाई क्रमैसंग घटाऊँदै लागें र विगत दुई महिना यता लगभग पूर्ण शाकाहारी बनेको छु। त्यो ‘लगभग’ किनभने दूध-दहीभने अझै बाँकीनै छ। यस्तोलाई अंग्रेजीमा lacto vegetarian (दुग्धाहारी?) भन्छन्।
केहि विशेष घटनाहरुले मान्छेको संवेदनालाई बढाईदिँदा रहेछन्। छोरीको जन्म एउटा यस्तै घटना भयो। एउटा नयाँ मानवजीवनको शुरुवात र हुर्काईलाई नजिकबाट हेर्दा-हेर्दै म सबै जीवनप्रति अझ संवेदनशील हुन थालेछु। मान्छे वा जनावर, सबैको जीवन एउटा अद्वितिय र अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य हो। जीवनको हत्या घोर कुरुपता हो र यस्तो कुरुप कार्य जीवनप्रति कुनै संवेदनशीलता नभएको क्रुर मान्छेले मात्र गर्न सक्छ। यो मान्यता अब मेरो मनमा गहिरो गरी बसेको छ। यो दशैंको याममा खसी-बोका-च्याङ्ग्रा-भेंडा आदि घिच्याऊँदै हिँडेका मान्छेहरु देख्दा मलाई उनीहरुले मान्छेकै बच्चालाई घिच्याऊँदै हिँडिरहेजस्तो लाग्छ।
एउटा ई-मेल प्राप्त हुनु अर्को घटना बन्यो। साउदी अरेबियामा कार्यरत भाइ उदय घिमिरेले एउटा मेल पठाएका थिए, त्यहाँको बहुचर्चित एक हत्याकाण्ड बारे। हत्याकाण्डको नृशंशता कहालीलाग्दो थियो। केहि फिलिपिनोहरुले एकजना पाकिस्तानी मान्छेलाई हत्या गरेर उसको मासु खाएका थिए र सम्पूर्ण गतिबिधिहरुलाई क्यामेरामा कैद पनि गरिररहेका थिए। पछि ती मान्छेहरु समातिएपछि ती फोटोहरु फेला परेर सबैका हातमा पुगेका रहेछन्।
भाइको ई-मेलमा धेरै फोटाहरु थिए। मृत पाकिस्तानीको लाश कुनै फलेकमा राखिएको, पहिला उसको घाँटी छिनालिएको, त्यसपछि क्रमैसंग हात खुट्टाहरु निकालिएको, उसको छाती फोरेर दुई भाग लगाईएको, भित्रका मुटु, कलेजा, फोक्सो आदि झिकिएको, आन्द्राभुँडी झिकिएको आदि अनेक फोटाहरु थिए। ती सबै राक्षसहरु अत्यन्त आनन्दित ‘पिकनिक’को मुडमा थिए, उनीहरुको अनुहारमा अलिकति पनि लज्जाबोध वा डर थिएन। ती मध्येका केहि उक्त अभागी मान्छेको जननेन्द्रिय हातमा लिएर क्यामेरातिर फर्केर जिस्कँदै हाँसिरहेका पनि थिए। त्यहाँ आन्द्राभुँडी सफा गरिएका तस्बीरहरु पनि थिए, अनि केहि ठूला ड्रमजस्ता भाँडाहरुमा मासु पकाएको र अन्त्यमा गोलाकार बसेर सबैले मासु खाएका फोटाहरु पनि थिए। सबै घटनाक्रम हामीकहाँ खसी-बोका काटेर गरिनेसंग उस्तै थिए।
Labels: आफ्नै कुरा, समसामयिक
वेदनाथ पुलामी (उमेश ) October 16, 2010 at 5:46 AM
भने पछी .........यो यात्राको कथा रमाइलै रहे जस्तो -बसन्त दाइ !
अरु पनी सुनाउदै जानुस .... पार्ट १, भए'छि २,३ ... हुदै त पक्कै जान्छ नी होइन ?
चिन र जापानमा जस्तै यहाँ कतारमा पनि मांसाहारीकै बोलबाल छ , किनकी इकोनोमिक हिसाबले पनि भेजिटेरिएन भन्दा मांसाहारी नै ठिक छ !
मैले म साहाकारी हु भन्दा कति अरबिकहरुले मलाई नी कति पटक सोध्ने गरेका छन् ....अण्डा पनि खादैनस भनेर ? हैन यो अण्डा चाही भेज खाना अन्तर्गत पर्छ र ? भन्ने गर्छु ... अनि मरी मरी हास्छन -उनीहरु !
कृष्ण पौडेल October 16, 2010 at 10:44 AM
राम्रो लेख , वसन्तजी । नैतिक , धार्मिक र मानवीय दृष्टिकोणले मांशाहार उचित छैन तर पनि कतिपय समाजमा मांशाहार बिनाको जीवन कल्पनातीत छ । उदारहणको लागि दक्षिण पूर्वी एसिया लगायत, जापान, कोरिया र चिनलाई हेरौँ जुन क्षेत्र अहिंसावादी बुद्धका अनुयायीहरू बढी भएको स्थान पनि हो ।
जापानको एउटा बुद्ध गुम्बामा शाकाहारको एउटा कथा सुनेको थिएँ नेपाली विषयका एउटा त्रिभूवन वि विका गुरूबाट । वहाँ पर्नु भएछ जन्मसिद्ध शकाहारी । जापान भ्रमणको यो ३ महिने कार्यक्रममा शाकाहारी भोजन गर्न साह्रै गाह्रो भएका बेला , एउटा बौद्ध मन्दिरमा खाना काने कार्यक्रम परेको हुँदा मख्ख हुनभएछ र वहाँलाई सोधिएछ । वहाँले आँफू शाकाहारी भएको बताएर खानाखाने ठाउँमा पलेँटी कसेर बस्नु भएछ । खाना खाइसक्न लाग्दा , एउटा मासुको जस्तो टुक्रा मुखमा पुगेछ र अचम्म मान्नु भएछ । निकालेर हेर्दा मासु नै रहेछ । पछि शाकाहारी खानामा मासु भेटिएको कुरा बताउँदा , उनीहरूले सकेसम्म मासुका टुक्राहरूलाई पञ्छाएर शाकाहारी नै बनाउन प्रयत्न गरिएको तर १,२ टुक्रा भाँडोमा छुटेको हुनसक्ने तर्क पाउनु भएछ। उनीहरूले 'सरि' पनि भनेनन् रे !
मैले चिनियाहरूले 'बाँदर' लाई खाने तरिका अमानवीय जस्तो पाएँ । जीउँदो बाँदरलाई पक्रेर उसको शरीर र टाउकोलाई एउटा काठको कवच जस्तो भित्र छट्पटाउन नमिल्ने गरी टाउकोको माथिल्लो पट्टिको भाग मात्र देखिने गरी राखेर, धारिलो चक्कुले खप्पर फोरेर गिदी सिन्का ( चपस्टिक)ले खाँदा रहेछन् । अनि चिनिया खवाइमा गर्वभती सुंगुर , बाख्रा र अरू जनवारलाई मारेर तिनका पेटबाट 'इम्ब्रोइ' सहितको भ्रूणहरूलाई हर्बहरू सहित् पकाएर खानु विशिष्ट मानिँदो रहेछ ।
प्रबिण थापा October 17, 2010 at 1:53 AM
nice one basanta jee! hapy vijaya dashami4u n urs family
अविरल यात्री October 17, 2010 at 6:29 AM
दादा शाकाहारी बन्न खोज्नु भएको कुराले हर्षित भए, चाइना बस्दा साकाहारी भन्दा मम्साहरी नै बढी खाइन्थ्यो भन्ने कुरा चाही हजुरको पालामा थियो होला. किनकि म २०६०साल पछी त्यहाँ पुगे तर मांसाहारी बनिन.
अन्त्यमा उदय जीले यहाँलाई उपलब्ध गराउनु भएका तस्विर करिब ५०-६० वटा मलाई पनि प्राप्त भएका थिए इमेलमा नै जति बेला म पनि साउदी अरेबियामा नै थिए. तर फरक यत्ति हो मलाई उदय जीबाट प्राप्त भएका थियनन. उहाँले थाहा पाइसक्नु भएको रहेछ कि फिलिपिनी हरुले पाकिस्तानीलाई त्यस्तो कु-ब्यबहार गरे भनेर तर म भने कुन देशका होलान यी नरपशु भन्नेमा नै खोजि गर्दा गर्दै नेपाल फिर्ता भए.
Rishav Atreya October 19, 2010 at 9:06 AM
बसन्त सर लाई यो लेख को लागि धेरै धेरै धन्यवाद । मैले एस्तो प्रकृतिको लेख शायदै पढ्न पएको थिय । न त कुनै धर्मिक ब्यक्ती बाहेक बाट यि बिषयमा छलफल नै भएको पाईन्छ । जहाँ सम्म धर्मका नाम मा अबोध पसु को अमानबिय हत्या का कुरा छ्न ति कुरुप रक्षास दिमाख ले मात्र शही ठान्दछ । न्युनतम पनि मानबियता भएकोले चाड बाड को बेला सानो बच्चाको अगाडि एउटा पसुको हत्या गर्दा सोच्न सक्नु पर्ने हो । मासु खानु छुटटै प्रसङग हो हिन्दू जस्तो धर्म को नाम मा हत्या गर्नु जस्तो कुरुप राक्षस पन अरु के नै होला र ? धर्मको नाम मा गयत्री मन्त्र बिहान जप्नु नपर्ने , शरीर मा जनै लगाउदा लज्जा बोध हुने लाई दसैं वा कुल पूजा भन्दै भगवानको नाम मा पशु बली अनिबार्य चाडाउनै पर्ने के बाध्यता होला ? मैले बुझ्न सकेको छैन ? शाकाआहर गर्नु धर्मको लागि होइन मनबियताको लागि हो भन्ने सन्देश सबैमा पुग्न सफल होस शुभ कामना!
Dilip Acharya October 19, 2010 at 2:32 PM
इमानदारिताका साथ कुरा राख्दा आफ्नो हाल भने अहिले बेला-बेलामा चुरोट छाड्दै फेरि तान्दै गर्ने पुरानो अम्मली को जस्तो छ ।
बीचमा १-२ पटक छाडेकै चैँ हैन् तर "खान्न" भनेर केही समय मासु खाइँन् । तर लामो समय गएन ।
मासु खानु राम्रो होइन र पौष्टिकताको हिसाबले पनि यसका विकल्प वा यो भन्दा राम्रो शाकाहारी तत्व नभएका होइनन् भन्ने थाहा हुदाँहुदैँ पनि अहिलेसम्म भने मांसहारी नै छु ।
हुन त मासु नखाँदैमा अहिंसक भइने हैन तर पनि सकेसम्म म पनि तपाईकै शाकाहारको यात्रामा पच्छ्याउने प्रयासमा भने हुनेछु ।
ametya October 22, 2010 at 6:12 PM
बसन्त दाइ ....उब्जाउ तरकारीले यो बढ्दो pollution लाई धाउनु पनि त पर्यो नि ....सोच्नुस त सबै साकाहारी भए भने त ecological system नै disbalance हुन्छ !!! अनि फेरी मासु को बोलबालामा साकाहारी त एकलकाटे होला कि फेरी ????
कति दिन बस्ने?
बा अब हुनुहुन्न---